Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Hawaii kwuru nke ọma na COVID-19
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • WTN
John De Fries, onye isi ala na onye isi nke Hawaii Tourism Authority
Gọvanọ Hawaii Ige na-ekwupụta ebuli ọtụtụ ihe mgbochi mberede dị ka ọnwa Disemba, ihe mkpuchi nchekwa na iwu nchekwa njem ga-adịgide.
Otú ọ dị, a ga-ahapụ ụlọ ọrụ nzụkọ ka ịmalitegharịa.
Mkpebi maka mmachi ga-esi na Steeti gaa na mpaghara Island.
N'ịgbaso usoro mba na United States, a Aloha Steeti Hawaii na-ekwupụtakwa COVID-19 abụghịzi ihe iyi egwu dị egwu.
Njem nlegharị anya ga-aga n'ihu wee gbasaa. Omume mbụ azụmahịa a bụ ozi na-anabata, kpọmkwem maka ụlọ ọrụ MICE steeti, dị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere oghere nzukọ, ebe mgbakọ, na ebe nzukọ.
Ọ bụ ezie na nke a bụ ozi ọma ozugbo maka njem nlegharị anya, ụfọdụ na-eche na ọ nwere ike mechaa laghachi azụ, n'agbanyeghị nkwupụta nke ndị ọchịchị, iwu mmeghe dị otú ahụ ga-anọrịrị. Steeti na-atụ anya na mmesi obi ike a ga-eweghachi ntụkwasị obi maka ngalaba ahụ.
Hawaii na-azọrọ na ya nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa mgbe ha na-elepụ anya na ọtụtụ ndị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na State bi n'ebe ndị ọzọ (ụlọ ma ọ bụ ná mba ọzọ) enwetawo ogbugba ha na Hawaii ma ugbu a na-agụta dị ka otu n'ime 1.4 nde Hawaii bi - ihe na-abụghị eziokwu. .
eTurboNews jụrụ ajụjụ a ọtụtụ oge, ma Gọvanọ, ndị isi obodo na HTA ezenarị azịza doro anya.
Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ọnwụ ahụ ebelataghị n'agbanyeghị ọgwụ mgbochi ahụ, na ọnụego ọrịa na-aga n'ihu n'ụzọ kwesịrị ekwesị, Hawaii na-agbaso usoro mba na-eleghara ọnụọgụ ndị a anya iji weghachi azụmaahịa azụ.
Hawaii Gọvanọ David Ige taa sonyeere ndị Mayors Hawaii n'ịkpọsa ibuli ọtụtụ mmachi ọrịa na Disemba 1, na-egosi na Hawaii emeghekwara ọzọ maka azụmaahịa.
Ndị isi obodo Island ga-enwe ike ịtọ iwu mberede nke onwe ha na-enwetaghị nnabata tupu Gọvanọ
Iwu nchekwa ndị a ga-adị.
Mmemme Njem Nchekwa nke Hawaiʻi, chọrọ nnwale maka ndị njem na-abụghị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Iwu nkpuchi ime ụlọ;
Achọrọ ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ nnwale maka ndị isi steeti na ndị ọrụ mpaghara; na
Ihe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ ule chọrọ maka ndị ọrụ ngo na ndị ọbịa na akụrụngwa steeti.
"Usoro ndị a na-enyere aka ịmaliteghachi ụlọ ọrụ ndị ọbịa anyị n'oge kwesịrị ekwesị, yana ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa steeti anyị na-ahọrọ n'etiti ndị kasị elu na mba ahụ, yana nchekwa ahụike maka ndị njem n'ime ụlọ nke a chọrọ site na mmemme Njem Nchekwa nke Hawaii. Mmachibido iwu gọọmentị etiti gbanwere na mbata mba ofesi yana ịga n'ihu nke iwu mkpuchi ime ụlọ nke Hawaii na-enye nchebe ọzọ, "Onye isi oche na onye isi oche na onye isi oche nke Hawaii Tourism (HTA) John De Fries kwuru.
Na mgbakwunye na ọkwa nke taa sitere n'aka Gọvanọ, Onye isi obodo Honolulu Rick Blangiardi kwupụtara ibuli oke ikike yana ihe ndọpụ uche mmadụ maka ihe omume na Oahu, isi ihe na-amaliteghachi nzukọ na mgbakọ na ebe mgbakọ Hawaii na akụrụngwa ntụrụndụ dị iche iche.